I-River guardrail iwuhlobo lwesitimela esakhiwe emfuleni, esidlala indima ebalulekile ekuvikeleni ukuphepha komuntu siqu kanye nemoto. Ukusebenza kwayo kokumelana nokushayisana kugqame kakhulu, ikakhulukazi ezimotweni nakubantu. Okubaluleke kakhulu ukuthuthukisa ukusebenza kokuvimbela ukushayisana, ikakhulukazi umthelela wemoto, nokuvimbela imoto ukuthi ingagijimi emanzini, okungase kuholele engozini yokuphila, ikhono lokulwa nokushayisana kwe-river rail libaluleke kakhulu.
Igama Lomkhiqizo I-Bridge Guardrail
Okubalulekile Ipayipi Elihlanganisiwe Lensimbi Engagqwali
Umbala Kwenziwa ngokwezifiso
Usayizi Kwenziwa ngokwezifiso
Ubuso I-Powder Coating
1.Ukusebenzisa i-anti-corrosion kanye ne-anti-rust technology ukukhulisa impilo yomkhiqizo.
I-2.Ingaphezulu lenziwe ngensimbi engagqwali futhi linezinto ezinhle zokuzihlanza.
3.I-Guardrail yebhuloho kulula ukuyifaka, akulula ukuyonakalisa, inezindawo ezimbalwa zokuthintana ukuze kube nokuzinza okuhle.
4.Izinsimbi zokuqapha ibhuloho zivikela ukuphepha kwabahamba ngezinyawo, zinhle futhi zingabizi.
Izinkinga ezidinga ukunakwa ngesikhathi se-bridge guardrail Construction
1. Ngesikhathi kwakhiwa i- guardrail, idatha yezikhungo ezihlukahlukene izophathwa ngokunembile, ikakhulukazi indawo enembile yamapayipi ahlukahlukene agqitshwe ku-subgrade. Akuvunyelwe ukudala umonakalo ezikhungweni ezingaphansi komhlaba ngesikhathi sokwakhiwa. Esimeni lapho ukujula kokugcwalisa okunganele kwepayipi lokuxhumana elingaphansi komhlaba, ipayipi lokudonsa amanzi noma i-culvert top, indawo yekholomu izolungiswa noma indlela yokumisa ikholomu izoshintshwa.
2. Uma ikholomu ishayelwa ijule kakhulu, ikholomu akufanele ikhishwe ukuze ilungiswe. Okusele kuzokhishwa, futhi isisekelo saso sizophinde sigxishwe ngaphambi kokushayela, noma indawo yekholomu izolungiswa.
3. Umzila wokugada ibhuloho uzofakwa nepuleti le-flange, futhi kuzonakwa ekumisweni kwepuleti le-flange kanye nokulawulwa kokuphakama kwekholomu phezulu.
Okwedlule: Ubhasikidi wocingo lwensimbi engagqwali/ubhasikidi wokubulala amagciwane
Olandelayo: Uthango lwensimbi yokuvikela ukuphepha kwendlu yasegcekeni
I-Garden lawn insimbi engagqwali ye-bamboo guardrail
Uqalo lwensimbi engagqwali njengesigaba se-guardrail 1. Uthango lokulingisa uqalo: i-bamboo link guardrail ihlukaniswe yaba imikhiqizo emithathu ngokuya ngemininingwane yamalungu. Ububanzi bamapayipi oqalo okulingisa buyi-17 mm, 19 mm no-25 mm ngokulandelana. 2. Imbali yoqalo lokulingisa nothango lotshani: uthango lotshani lokulingisa lwembali yoqalo notshani wucingo lwe-PVC. I-Bamboo guardrail ingumkhiqizo we-chromium alloy, obonakala ngamandla amakhulu,...
Ukwethulwa kwegceke le-Villa iron fence 1. Uthango lusebenzisa indlela yokuhlanganisa unomphela, akukho ukugqwala, akucishi, akukho mbala ofiphalayo, kugqamile okokugcina futhi kuzinzile ngombala. 2. Akukho ukuklama komhlangano we-welding okwenza ukufakwa kube lula futhi kusheshe. 3. Ukwelashwa okunqanda ukubola okunezingqimba ezine kanye nempilo yesevisi engaphezu kweminyaka engamashumi amabili konga izindleko. 4. Ukuvikelwa kwemvelo kuxazulula inkinga yemikhiqizo evamile ibe nokungcoliswa kwezakhiwo. 5. Izici eziqinile nezivumelana nezimo zomlingani ongavuthiwe...
Ukuhlukaniswa komgwaqo okuphakathi komgwaqo kamasipala wokuqapha umgwaqo
Imikhiqizo emikhulu: i-solar anti glare guardrail, i-galvanized steel guardrail, i-galvanized road guardrail, i-road guardrail, i-pedestrian road guardrail, i-motorized and non motorized guardrail, i-road center guardrail, i-road guardrail ene-billboard, i-river guardrail, i-lawn flower bed guardrail I-Guardrail yokuhlukaniswa komgwaqo kamasipala inemininingwane ephelele. , izinhlobo eziningi, futhi ubude nombala kungakhethwa ngokuzenzakalelayo. I-Municipal guardrail iwumzila ovikelayo omiswe phakathi nomgwaqo wejubane, ohlose uku...
Multi layer steel stainless processing stamping...
Imininingwane yomkhiqizo wokuhlunga: I-wire mesh, insimbi engagqwali, indwangu kasilika emnyama, i-galvanized mesh, njll. Ubuchwepheshe bokucubungula: isigxivizo esikhulu somshini. Izici: isihlungi esiyindilinga sinezinzuzo zendawo enkulu ephumelelayo, ukusetshenziswa okulula kanye nezindleko eziphansi. Ukuhlukaniswa: kungaba ungqimba olulodwa noma ungqimba oluningi, noma kwenziwe ngensimbi engagqwali noma usilika omnyama. Isicelo: ikakhulukazi esetshenziselwa ukuhlunga embonini yenjoloba nepulasitiki kanye nokuhlolwa kokusanhlamvu, uwoyela kanye ne-ph ...